10 Askari Kenyaan ah oo ku dhintay Weeraro Ka Dhacay Deegaanno Katirsan Jubbada Hoose.
Saturday February 02, 2019 - 12:47:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadada xiriirisa deegaanka Dhoobleey iyo degmada Afmadoow ayaa sheegaya in weeraro jidgal ah iyo qaraxyo lagu beegsaday kolonyo ciidamo Kenyaan ah oo isbuucii lasoo dhaafay kasoo tallaabay xuduud beenaadka.
sawir hore Meydadka Askar Kenyaan ah oo Soomaaliya lagu dilay.
Xoogaga Al Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe qaraxyo iyo weeraro dhabbagal ah u dhigay ciidamada Kenyaatiga ah.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in weerarkii xalay ciidamada Melleteriga Kenya (KDF) looga gubay 2 gaari oo mid kamida uu ahaa gaari gaashaaman islamarkaana askar farabadan lagu dilay.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarada ciidamada Kenya khasaara lixaad leh lagu gaarsiiyay, isbuucii lasoo dhaafay ugu yaraan 10 askari Kenyaan ah oo uu kamid ahaa dhaqtarkoodi gaarka ahaa ayaa lagu dilay weerar jidgal ah.
Habqanka ciidamada Kenya ayaa wali jidyaal ku ah wadada isku xirta degmada Afmadoow iyo deegaanka Dhoobleey waxayna wali unuguglyihiin weeraro hor leh oo uga yimaad Xarakada Shabaabul Mujaahidiin